Bladder Infections (ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bladder Infections (ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း)
Bladder Infections (ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း(သို့) ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်း ဆိုသည်မှာ ဆီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်မှုမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ကိစ္စတွေမှာ ဒီလိုပိုးဝင်တာကို ပြန်လည်ကုသရာမှာအရမ်းကြာတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့သောဆေးများနှင့်ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုသမှုခံယူခြင်းနှင့် တစ်ခြားသောရောဂါတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လည်း ဆီးအိမ်ရောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ သင့်တော်တဲ့ကုသမှုတစ်ခု ခံယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကနေ သက်သာစေမှာပါ။ အပြင်းထန်ဆုံးရောဂါလက္ခဏာကတော့ကျောက်ကပ်ပါပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းမှုအတွက်ပုံမှန်ကုသမှုတွေကတော့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဆီးအိမ်ရောင်ခြင်းတွေအတွက် ကုသမှုကတော့ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရင်းပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားကြပါတယ်။
Bladder Infections (ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဆီးအိမ်ပိုးဝင်တာဟာ တော်တော်ကိုအဖြစ်များကြပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုဖြစ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးအားလုံးရဲ့၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ထက်မနည်းတဲ့ဦးရေဟာ သူတို့ဘဝမှာအနည်း ဆုံးတစ်ကြိမ်တော့ဖြစ်ဖူးကြပါတယ်။ မည်သည့် အသက်အရွယ်မှာ မဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေမှာတော့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဆီးအိမ် ပိုးဝင်နိုင်ခြေပိုများလာကြပါတယ်။ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တာတွေကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် ပိုးဝင်ခြင်းကိုသက်သာအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုသိရဖို့အတွက်တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါ။
Bladder Infections (ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဆီးဟာသွေးရောင်ဖြစ်နေခြင်း (သို့) အနံ့ဆိုးခြင်း
နည်းနည်း နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏဆီးသွားနေရခြင်း
ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း (သို့) ခါးအောက်ပိုင်း အောင့်ခြင်း
ခါး ရဲ့အလယ်တည့်တည့် (သို့) ခါးနှစ်ဖက်စလုံးမှာနာကျင်ခြင်း၊
ကလေးငယ်များနေ့ဘက်တွေ သေးထွက်ကျ၍ စိုစွတ်နေတတ်ခြင်း။
အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေထဲက တစ်ခုခုသင့် မှာ ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါပြီ။
ခါး သို့် ခါးဘေးဖက်များနာကျင်ခြင်း
ကလေးများနေ့အချိန်တွင် သေးထွက်ကျ၍ စိုစွတ်နေတတ်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Bladder Infections (ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်း အရာများစွာရှိပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်း ။ ဘက် တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းဟာ အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ ဆီးကနေပါသွားရမယ့်အစား ဆီးအိမ် နံရံမှာတွယ်ကပ်နေပြီးမျိုးပွားကြကာ ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ဘက်တီးရီးယားကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့်အူမကြီးထဲမှာနေတဲ့ E.coli ဆိုတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန္တာကိုယ်ထဲမှာ E.coli အကောင်တွေအရမ်းများလာတဲ့အခါ ဆီးကနေမ ဖယ်ရှားနိုင်တော့ပဲ ပိုးဝင်ခြင်းဆိုပြီးဖြစ်ကြရပါတယ်။ ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ အခြားအကောင်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာ(Chlamydia၊ Mycoplasma)။
ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စေတဲ့ အခြားအကြောင်း အရာတွေကတော့
ဆေးကြောင့်ဖြစ်သော ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်း ခြင်း ။
cyclophosphamide နဲ့ ifosfamide လိုမျိုးဓါတုကုထုံးတွေမှာ သုံးတဲ့ဆေးတွေဟာ ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဆီးခုံနေရာတစ်ဝိုက်ကို ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်ထိတွေ့ကုသရ လျှင်လည်း ဆီးအိမ်ရောင်တတ်ပါတယ်။
ဓါတုပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကြောင့် လည်းရောင်တတ်ပါတယ်။ဥပမာ(သုက်ကောင်များကိုသတ်နိုင်သော ဂျယ်လီ၊ မိန်းကလေးသုံး စပရေး၊ ရေမြှုပ်နှင့်ရေချိုးခြင်း )
ဆီးအိတ်ရောင်ခြင်းဟာအခြားရောဂါတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ( ဆီးချိုသွေးချို ၊ကျောက်ကပ်တွင်ကျောက်တည်ခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းနှင့် အာရုံကြောမကြီးဒဏ်ရာရခြင်းတို့မှ တစ်ဆင့် ဖြစ်ပါတယ်)
ငါ့ဆီမှာ Bladder Infections (ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကဘာတွေကို မြင့်တက်စေသလဲ
လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ အချို့သားဆက်ခြားနည်းလမ်း များအသုံးပြုခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊သွေးဆုံးခြင်း၊ ဆီးအိတ်တွင်ကျောက်တည်ခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း၊ ဆီးချိုသွေးချိုရှိခြင်း၊ HIV ပိုးကူးစက်ခံနေရခြင်းနှင့် ကင်ဆာကုသမှုခံယူနေရခြင်း၊ ဆီးပိုက်အကြာကြီးထည့်ထားရခြင်း။
ယောက်ျားလေးများတွင်တော့ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်း ချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲနှင့်ဆီးအိမ်ရောင်တာ ဖြစ်ခဲပါတယ်။
Bladder Infections (ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Bladder Infections (ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်း ကိုကုသခြင်း။
အရင်ဆုံးပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ကုသကြပါတယ်။ ဒီထက်ပိုမိုသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ မေးမြန်းတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ်ကူးစက်ခြင်းတွင်ရောဂါလက္ခဏာများသည်တစ်နေ့ထဲ နှင့် သိသိသာသာဆိုးဝါးလာလျှင်ပိုးသတ်ဆေးကို ၃ ရက်ကနေ တစ်ပါတ်အထိသောက်သင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ထပ်၍ကူးစက်ခံရ လျှင်တော့ပိုးသတ်ဆေးများကိုရေရှည်စွဲ၍ သောက်ရပါမည်။
သွေးဆုံးပြီးသောအမျိုးသမီးများတွင် မိန်းမကိုယ်လိမ်း estrogen ခရမ်လိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အခြားအကြောင်းရင်းများကြောင့်ဖြစ်သော ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို ကုသခြင်း
ဤကုသမှုတွင် ဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းများကို ကုသဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို ကုသရာတွင် ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်
ဆေးသောက်ခြင်း (သို့) ဆီးအိမ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ဆေးထည့်ခြင်း
ရေ ၊ ဓါတ်ငွေ့ (သို့) ခွဲစိတ်၍ ဆီးအိမ် ကိုကျယ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊
ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်ဆေးများကြောင့်ဖြစ်သောဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းများတွင်ရောဂါသက်သာစေသောကုသမှုများခံယူခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းစေသောအရာများ ထွက်သွားစေရန် ရေများများသောက်ပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ရပါမယ်။
အကယ်၍သင်ဟာမိန်းကလေးဆိုလျှင်ဆီးသွားပြီးတိုင်း ရှေ့မှနောက်သို့ပုံစံ သန့် စင်ပေးပါ။ (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောက်မှရှေ့သို့သန့်စင်လျှင် စအိုများ Ecoli ဘက်တီးရီးယားများသည် ဆီးလမ်းကြောင်းထဲ ဝင်ရောက်ကာ ဆီးအိမ်ပိုးဝင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်)
မိန်းမကိုယ်သန့်စင်သောအရည်များ ၊ စပရေးများကို ရှောင်ရှားပါ။
ချည်သားအတွင်းခံများနှင့် ပွပွချောင်ချောင်အဝတ်များကိုသာ ဝတ်ဆင်၍ အတွင်းခံများကို တစ်နေ့တစ်ခါပုံမှန်လဲပေးပါ။
ရာသီလာနေစဉ်တွင် ပုံမှန်လစဉ်သုံးပစ္စည်းများအစား ပိုးသန့်စင်ထားသောပစ္စည်း များကိုသာအသုံးပြုပါ။
သားဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်း (သို့) သုက်ပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ရှားပါ။
သုက်ကောင်သတ်နိုင်သည့် အရာမပါသည့် ချောဆီပါသောကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုပါ။
သင့်မှာ မေးခွန်းတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရရှိဖို့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Understanding Bladder Infections -- the Basics. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/understanding-bladder-infections-basic-information. Accessed July 12, 2016.